Chikunguru dombo rekuzvarwa - Ruby dombo rinokosha muna Chikunguru - Nyowani yekuvandudza 2021
Ruby ndiro dombo rekuzvarwa raChikunguru, zvinoenderana neyese yekare neyemazita ezuva raJune dombo. Iyo chaiyo dombo rinokosha yeJuly dombo rekuzvarwa mhete kana chishongo chishongo.
Zvinorevei kuti dombo rekuzvarwa raJuly?
Dombo rekuzvarwa ibwe rinosanganiswa nemwedzi wekuzvarwa waJuly: ruby. korari, dombo rinokosha reJuly, rinoonekwa semambo wematombo uye anomiririra rudo, hutano nehungwaru. Yaitendwa yakapfeka tsvuku tsvuku Ruby akapa rombo rakanaka kumuridzi wayo. A Ruby ndiyo yakakosha sebwe rinokosha uye kukosha kwayo kunowedzera zvichibva paruvara rwayo uye kunaka.
Chii chaJuly dombo rekuzvarwa?
Dombo rekuzvarwa raJuly rinowanikwa kupi?
Chii chinonzi chishongo chekuzvarwa chaJuly?
Ndezvipi zviratidzo zveZodhiac zvematombo ekuberekwa aChikunguru?
A Ruby ibwe dzvuku, rinokosha remamineral corundum. Ruby ndechimwe chetsika makadinali anokosha. Izwi rekuti ruby ​​rinobva ku ruber, chiLatin kune tsvuku. Ruvara rweRuby rwunokonzerwa nechinhu chromium.
The akanakisa Ruby ine yakachena, inopenya tsvuku kusvika zvishoma panga kutsvuka ruvara. Mumisika mizhinji, akachena mutsvuku mavara anoraira mitengo yepamusoro uye Ruby neakawandisa orenji nepepuru hazvina kukosha kwakanyanya. Muvara wacho haufanire kunge uri wakasviba kana wakareruka kuti utariswe semhando yepamusoro.
The Mogok Mupata muUpper Myanmar waive kwemazana emakore sosi yepasi rose kwa korari. Nhoroondo, korari akacherwawo muThailand, muPailin neSamlout District yeCambodia, pamwe neAfghanistan, Australia, Brazil, Colombia, India, Namibia, Japan, neScotland. Mushure meChipiri Hondo Yenyika ruby ​​mari yakawanikwa muMadagascar, Nepal, Pakistan, Tajikistan, Tanzania, neVietnam.
Isu tinotengesa ruby ​​mhete, zvishongo, mhete, mitsipa nezvimwe.
korari zvinomiririra rudo, hutano uye huchenjeri. Kupfeka tsvuku tsvuku Ruby ipa rombo rakanaka kumuridzi wayo.
Ruby ibwe rinodzivirira iro rinogona kuunza mufaro uye kushuvira. Ruby inogadzira chipo chakakwana kune waunoda kana panguva dzakadai seZuva raValentine kana chiitiko. Iyo RubyHue iri padyo neruvara reropa, iyo inotakura okisijeni kunhengo dzese dzemuviri, iro dombo rinomiririra kuve nesimba uye nesimba. Dombo rine simba rekubatanidza nekukweretesa simba kumuviri. Ruby chengetedza kubva kuzvinhu zvisina kunaka izvo zvinowana simba rakanaka, kusimudzira hutano hwemweya uye hutano hwakazara.
Cancer neLeo mabwe ese mabwe anokosha eJuly.
Chero iwe uri Cancer naLeo. Ruby ndiro dombo kubva munaChikunguru 1 kusvika 31.
July 1 kenza Ruby
July 2 kenza Ruby
July 3 kenza Ruby
July 4 kenza Ruby
July 5 kenza Ruby
July 6 kenza Ruby
July 7 kenza Ruby
July 8 kenza Ruby
July 9 kenza Ruby
July 10 kenza Ruby
July 11 kenza Ruby
July 12 kenza Ruby
July 13 kenza Ruby
July 14 kenza Ruby
July 15 kenza Ruby
July 16 kenza Ruby
July 17 kenza Ruby
July 18 kenza Ruby
July 19 kenza Ruby
July 20 kenza Ruby
July 21 kenza Ruby
Isu tinoita tsika yakagadzirwa munaChikunguru mabwe ekuberekwa semaringi ekubatanidza, mitsipa, mhete dzemhete, zvishongo, zvishongo… ndapota taura nesu for quote.
Ruby vaviri 2.96 ct
Ruby vaviri 6.93 ct
Nyeredzi ruby ​​3.02 ct
Nyeredzi ruby ​​3.07 ct
Nyeredzi ruby ​​3.75 ct